२५ औं जनयुद्ध दिवस,सत्ता र स्वार्थ केन्द्रीत राजनीति – KhojPatrika
#‘नमस्ते–पे’ मोबाइल वालेट
२५ औं जनयुद्ध दिवस,सत्ता र स्वार्थ केन्द्रीत राजनीति
खोज पत्रिका बिहिबार, २०७६ फाल्गुन १, १० :५४ बजे
फागुन १ । तत्कालिन नेकपा माओवादीले भूमिगत रुपमा गुरिल्ला युद्ध सुरु गरेको दिन । तत्कालिन माओवादीका नेताहरुको शैलीमै भनौं, सामन्तवाद, दलाल र नोकरशाही पुँजीवादका विरुद्ध जनयुद्ध । बन्दुकको नालबाटै जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्ने र साम्यवादी शासन व्यवस्था कायम गर्ने उद्घोष । २०५२ साल फागुन १ गते रुकुम, रोल्पा र सिन्धुलीका प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी सुरुवात गरेको जनयुद्ध बिहिबार २५ औं बर्षमा । दश बर्ष चलेको सशस्त्र बिद्रोहले देशमा ठूलै भुइँचालो ल्याइदियो ।
लठ्ठीको भरमा सुरु भएको कहालि लाग्दो युद्धले १७ हजारको ज्यान लियो । कयौं अझै बेपत्ता । कि सास चाहियो कि लास चाहियो भन्दै परिवार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तीको छानविन आयोगमा धाएको धायै छन् । घाइते तथा अपाङग अहिले पनि शरीरभित्र लागेका गोलीसँगै हिडिरहेका छन् । तर, आयोगको पदाधिकारी नियुक्ती र म्याद थप्नैमा सरकार केन्द्रीत छ । गुनासो सुन्ने र सम्बोधन जनयुद्ध सकिएको १५ बर्षमा पनि पूरा हुन सकेन । युद्धमा होमियाका केही कार्यकर्ता बैदेशिक रोजगारीका लागि पलायन भए । कोही साझ र बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्तामै छन् । तर, युद्धका कमाण्डर सुकिला मुकिला बन्दै यतिबेला स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश र संघमा शासन चलाइरहेका छन् । अव एकैछिन जनयुद्ध सुरु गर्नेे केही पात्रहरुका कुरा गरौं । सुप्रमो कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । दुई पटक सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका प्रचण्ड पाटी गठन बिघटन गर्दे यतिबेला एमालेसँग पाटी एकता गरी नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बनेका छन् । जनयुद्धमा ज्यान गुमाएका १७ हजार मध्ये आफूले ५ हजारको मात्रै जिम्मा लिने भनेर अभिब्यक्ती दिएपछि प्रचण्ड आलोचित भइरहेका छन् । मोहन बैद्य । पाटी बिचलित भएको र क्रान्तिमा धोका दिएको भन्दै रामबहादुर थापा, सिपी गजुरेल, नेत्रबिक्रम चन्द देब गुरुङ लगायतका नेताहरु लिएर नेकपा माओवादी पाटी बनाएका बैद्यलाई अहिले गजुरेल बाहेक अरुले साथ छोडिसकेका छन् । उनी सानो पाटीको महासचिव बनेर क्रान्तिका गफ बाँडिरहेका छन् । बैद्यसँग छुटिएर प्रचण्ड कहाँ पुगेका रामबहादुर थापा हाल गृहमन्त्री छन् । डाक्टर बाबुराम भट्टराई । तत्कालिन माओवादीबाट सत्ताको नेतृत्व पनि गरे । पछि पाटी फुटाएर नयाँ शक्ती गठन गरेका भट्टराईलाई पाटी चलाउन हम्मे हम्मे परेपछि यतिबेला संघीय समाजबादीसँग बिलय भएका छन् । तर, अझै् युद्धको धङधङकीले नेत्रबिक्रम चन्द बिप्लवलाई छाडेको छैन् । उनी यतिबेला भूमिगत हुँदा नेता कार्यकर्ता भने प्रहरीबाट दैनिक पक्राउ परिरहेका छन् ।
युद्ध लडेका एउटै थालमा गास खाएका नेताहरु तितरबितर हुँदा, राजनीतिक स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्दा शहिद, बेपत्ता तथा घाइते र अपाङगले हाम्रै लागि जनयुद्ध भएको थियो भनेर कसरी पत्याउने ? साझ र बिहान छाक टार्न मुस्किल भएका कार्यकर्ताले सारथी चिल्ला गाडीमा हुइकिदै महलमा बस्दा जनयुद्धलाई कसरी बुझ्ने ? जनयुद्धले केही परिवर्तन ल्याएको छैन् भन्ने हुदै होइन सात राजनितिक दलको सहकार्यमा राजतन्त्र फालियो गणतन्त्र ल्याइयो । नयाँ संविधान पनि जारी भयो । तर, अनुभूति भएको खोइ ? जनयुद्धले २५ बर्ष पूरा गर्यो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यक्रममा सहभागि हुने प्रचारबाजीले जनतालाई के राहात दिन्छ ? २५ औं बर्षको जनयुद्ध दिवसमा एक पटक समिक्षा गरौं । नेता कहाँ पुगे ? कार्यकर्ता कुन अवस्थामा जीवन चलाइरहेका छन् ? शहिद परिवार, घाइते अपाङग कस्तो अवस्थामा छन् ? ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको हालत के छ ? २५ बर्षमा छातीमा हात राखेरै भनौं के जनयुद्धको सार्थकता र लक्ष्य यहि थियो त ?
ट्याग : #२५ औं जनयुद्ध दिवस